Hanao Krismasy any am-ponja… : naverina eny Antanimora fa tsy nahazo L.P. i Augustin A. | NewsMada
Hanao Krismasy any am-ponja… : naverina eny Antanimora fa tsy nahazo L.P. i Augustin A.
Any am-ponja izany no hanao Krismasy ny minisitra teo aloha sady filoha lefitry Mapar, Andriamananoro Augustin. Tsy nivoaka omaly, fa amin’ny talata 27 desambra izao no voatondro hivoahan’ny didim-pitsarana mikasika ireo raharaha anenjehan’ny fitsarana azy. Nahatonga savorovoro teo amin’ireo olona maro
Saika niafara amin’ny fidinana an-dalambe sy fifanjevoana ny savorovoro tetsy amin’ny fitsarana Anosy, omaly. Tsy faly ireo vahoaka tao amin’ny efitra fahatelo nanaovana ny fitsarana raha vao naheno fa amin’ny herinandro ny hivoahan’ny didim-pitsarana. Raikitra ny hiaka tsy nifandrenesana : « Avoay ! avoay…Tsy ekenay izany… ». Nandritra izany, efa tafaporitsaka nentin’ny mpitandro filaminana tany amin’ny varavarana hafa ny minisitra teo aloha ary lasa avy hatrany niaraka amin’ny fiara 4×4 nihazo ny any ambadiky ny Fitsarana an-tampony sy ny tranoben’ny Teti-pivoarana Anosy niverina any Antanimora. Raikitra ny fifanjevoana sy ny hazakazaka teo amin’ireo olona nanenjika sy niantsoantso fa hoe efa lasa nivoaka any ambadika any. Nikasa ny hanakana amin’ny fomba rehetra tsy hizoran’ny fiara ho any ambany atsinanana izy ireo… Efa tara anefa fa haingana be avokoa izany rehetra izany.
Tokony hisy olon-kafa hosamborina eto amin’ny firenena
Hany hery nameno ny arabe sy nihiaka ny hamoahana ny didy sy ny hanafahana ity olon’ny Mapar ity. Anisan’ny tena nampiaka-peo sy tsy faly ireo vahoakan’i Soamahamanina tonga teo ary mbola namerimberina fa tsy heloka ny fiarovana ny tanindrazana… Tsy tazana kosa fa efa niala tsikelikely ireo mpitarika Mapar hany mba tonga teny an-toerana. Niampy iray amin’ny alalan’ny fiara 4×4 avy eo ireo zandary efa tonga teo Anosy. Niangavy ny olona hikisaka sy tsy hanelingelina ny fifamoivoizana. Niakatra ihany ny hafanam-pon’ireo vahoakan’i Soamahamanina narahin’ny fanehoan-kevitra tsy fanekena izao mahazo ny havany sy ny zanany izao… Tonga amin’ny fanehoan-kevitra hafa, toy ny tokony hisamborana ny olon-kafa nahavita heloka teto amin’ny firenena sy ny kolikoly ataony… Nirava tsikelikely ihany izany avy eo. Tsy nisy fisamborana na fandefasana baomba mandatsa-dranomaso. Basy ihany rahateo no teny an-tanan’ireo zandary. Nisafo ny teny an-toerana koa ny Kly Ravoavy.
Nialoha ireo rehetra ireo, naharitra ora efatra ny fifandaharana teo amin’ny fitsarana raha nigadona teny Anosy tamin’ny 9 ora ity filoha lefitry ny Mapar ity, notronin’ny mpiaro azy. Nanda hatrany ny fiampangana azy Andriamananoro Augustin. Toy ny filazana fa nitarika ny hetsika tsy nahazoana alalana na koa namatsy vola ireo mpanao fihetsiketsehana… ny fanonganam-panjakana… « Tsy nisy fitakina ny fialan’ny filoham-pirenena izany », hoy ny mpisolovava Andry Fiankinana.
Tsy nekena ny fangatahana fahafahana vonjimaika
Nilaza koa ny mpisolovava fa tsy mahefa hitsara ny raharaha ny fitsarana ka tokony hofoanana satria niseho ny fisamborana tsy ara-dalàna. Tsy nisy ny fifamindram-panadihadiana teo amin’ny zandary Miarinarivo sy ny fampanoavana aty Anosy. Manana ny mari-boninahitra ny minisitra teo aloha ka misy ny fombafomba arahina raha hosamborina…
Nalefa hatramin’ny horonantsary (video) avy amin’ny voampanga nanamarina fa tsy nitarika ny hetsika tany Soamahamanina ny 22 septambra ny tenany. Nitsangana ireo vavolombelona avy any an-toerana nanamarina izany raha tsy nipoitra kosa ireo vavolombelona dimy nilaza fa nahita an’Andriamananoro nitarika ny hetsika sy nizara vola. Nambaran’ny mpitsara taorian’ny fifandaharana fa hivoaka amin’ny 27 desambra ny didy. Tsy nekena kosa ny fangatahana fahafahana vonjimaika (LP).
Araka izany, hanao fety eny Antanimora miaraka amin’ireo mpanao politika sy tompon’andraikitra sasany efa eny izany Andriamananoro Augustin.